Apple Watch - Ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Apple Watch Io no anaran'ny fiambenana orinasa paoma, kojakoja iray izay mameno tsara ny iPhone hanolotra anay avy amin'ny efijery misy andiana fampandrenesana ifanakalozan-kevitra ahafahantsika mifehy amin'ny interface vaovao natokana manokana ho an'ny Apple Watch.
Mifehy ny paoma fiambenana Manana fampisehoana mikasika sy kodiarana roulette antsoina hoe Digital Crown isika, miaraka amin'ny gyroscope, monitoran'ny tahan'ny fo ary ny accelerometers, dia hahatonga azy io ho fitaovana ilaina ho an'ny maro.
Modely mahazatra an'ny vy, maodely fanatanjahan-tena de aluminium ary antso hafa fanontana en Volamena karat 18. Karazan-karazany pulseras misafidy ny hamela azy io tanteraka araka ny itiavantsika azy.
La fahasalamana ary ny mpanisa, ny lamaody izay tsy mijanona ary aiza no ambaran'ny Apple Watch hatrizay dia afaka mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao. Tsy ho very izany amin'ny andronao isan'andro na amin'ny andro fanatanjahantena.
Raha te hahalala ny rehetra ianao vaovao momba ny Apple Watch ary vakio ny vaovao farany, kojakoja, rindranasa mifanaraka amin'ny fiambenana Apple sy fampahalalana mifandraika amin'izany, ity ny tranonkalanao.
watchOS 9 dia mety ho tonga miaraka amin'ny Apple Watch Series 8
ny Angel Gonzalez hace Ora 7 .
watchOS 9 dia niaraka taminay tamin'ny endrika beta nandritra ny herinandro vitsivitsy. Apple dia nanapa-kevitra ny hampiasa fotoana amin'ny fampandrosoana…
watchOS 9 dia mampiditra ny famerenana ny bateria ho an'ny Apple Watch Series 4 sy 5
ny Angel Gonzalez hace Andro 6 .
watchOS 9 dia naseho niaraka tamin'ny iOS 16 sy macOS Ventura tamin'ny fanokafana ny WWDC22. Nanomboka tamin'izay…
Apple dia manomana ny fanamby watchOS ho an'ny Andro Iraisam-pirenena Yoga
Ny fanamby ho an'ny Apple Watch dia singa iray hafa mampiroborobo ny hetsika eo amin'ny mpampiasa. Manzana…
watchOs 9 dia mitondra ny klavier espaniola feno amin'ny Apple Watch
ny louis padilla hace Herinandro 3 .
Ny fanavaozana manaraka ho an'ny Apple Watch dia hitondra fiasa izay nantenain'ny maro amintsika: ny klavier QWERTY misy amin'ny teny Espaniola,…
Ny Apple Watch Series 3 dia mbola amidy na dia tsy hahazo watchOS 9 aza
Nanokana ny fotoana mendrika indrindra ho an'ny watchOS 9 sy ny vaovao lehibe entin'izany ihany koa ny fehin-kevitry ny omaly. Tsia…
Ity no watchOS 9, fanavaozana lehibe ho an'ny Apple Watch
Ny famantaranandro Apple dia tsy vitan'ny hoe lasa smartwatch malaza indrindra eny an-tsena, fa mitohy ihany koa…
Tamin'ny 17 May, nankalazaina ny Andro Iraisam-pirenena iadiana amin'ny Homophobia, Transphobia ary Biphobia. Manararaotra ny fotoana, angamba…
ny Miguel Hernandez hace 2 volana .
Ny Apple Watch dia afaka mamantatra ny tsy fahombiazan'ny fo amin'ny EKG tsotra
ny louis padilla hace 2 volana .
Ny fandinihana vaovao dia nandroso ny mety hisian'ny Apple Watch mahita ny tsy fahombiazan'ny fo alohan'ny hanehoana soritr'aretina ...
Ny sensor mari-pana amin'ny vatana dia iray amin'ireo fanavaozana heverina fa hampiditra ny modely Apple Watch vaovao, ny…